China Scansys 3D Anterior Chikamu Kuongorora Sisitimu TA517 Kugadzira uye Fekitori | SDK
Scansys anterior chidimbu 3D analyzer inopa seti yehunyanzvi anterior chidimbu chekuongorora mhinduro dzemakiriniki. Chigadzirwa chinoshandisa Scheimpflug imaging,
Pfuti imwechete ye1 sekondi inogadzira 28/60 yakakwira-tsananguro corneal anterior uye posterior tomographic mifananidzo, uye 107520/230400 data mapoinzi anounganidzwa. Kuburikidza nekuongorora uye kuverenga, akateedzana emakoromea mamapu mepu, mamakisi emakona emakona, uye mepu dzakakwirira zvinogadzirwa, zvinova zvikamu zvekiriniki zvechikamu chepamberi. Iko kuongororwa kunopa rutsigiro rwakasimba.
Iyo keratoconus coefficient (KCP) inogona kushandiswa kuoneka kutonga mukana wechirwere uye kubatsira chiremba mukuongorora keratoconus.
Yakakwira-kumagumo Intraocular Lens Optimization
Chidimbu chehungwaru chakanyatso gadzirirwa IOL kugadziridza kwekuvhiya kwecataract, inoraira vanachiremba kuita pre- uye post-oparesheni bvunzo dzemalensi epamusoro-kumagumo emalensi uye sarudza maToric, aspheric kana multifocal intraocular lenses.
Iyo inotsigira kupfura imwe chete yepamusoro-tsananguro Scheimpflug tomographic mufananidzo pane chero kona, uye kuyera arch kukwirira, anterior kamuri kudzika uye imwe data inogona kushandiswa kune pre- uye post-operative kuongororwa kweICL kuvhiyiwa. AI njere inokurudzira hupamhi hweiyo lens yeICL uye inofanotaura iyo yekupedzisira postoperative arch kukwirira.
Zernike polynomials inogona kushandiswa kuyera kudzokororwa kweiyo yakazara corneal optical system, iyo inogona kushandiswa kuongorora kukanganiswa kwekuvhiya kwemaziso pahunhu hwekuona, uye inogona zvakare kushandiswa kutungamira kuvhiya kwakagadziriswa kwega kwega kuitira kuona kuona kwevarwere mushure mekuvhiyiwa. .
Analysis Keratoconus kuongorora
Unganidza huwandu hwakawanda hwedata kubva pasirese pasirese, kuburikidza neiyo corneal pamusoro KCI, AI ina-pikicha koni kuzivikanwa, SVM kupatsanura nzira, zvine hungwaru uye nemazvo kutonga mukana uye kuomarara kwenyaya yazvino yekeratoconus, iyo kukosha kukosha (KCP , huwandu 0% -100%). Iyi nhamba iri pamusoro ine mamepu mana epopu yekuratidzira uye iyo axial curvature yemashure ekumusoro kwekona, pamwe nekupararira kwechimiro kwemepu yeukobvu. Aya ndiwo akakosha hwaro hwekutonga keratoconus.
✦ Optimum intraocular lens
Yekutungamira basa module inonyatso gadzirirwa IOL kugadzirisa kweanodzora kuvhiya kwemaziso, ichipa k1, k2, km uye Astig kukosha, Kappa angle uye Alpha angle yematatu corneal refractive marudzi (Simk, yakazara corneal refractive simba, yechokwadi net net refractive simba) Uye zvimwe zvakakosha mareferensi tsika. Panguva imwecheteyo, inopa hunyanzvi hwekuverenga data senge pan-corneal astigmatism, pan-corneal idenderedzwa, pan-corneal yepamusoro-kurongeka aberration, uye inopa data rehunyanzvi nerutsigiro rwekugadzirisa iko kunokanganisa kukanganisa, astigmatism, idenderedzwa aberration, uye presbyopia mukuvhiya kwemaziso.
✦ Kuongorora kwekuchinja
Kuburikidza neZernike wavefront aberration ongororo, inopa hunhu hwekuongorora uye madhaimendi echirongedzo chega che zernike pane yepamberi, yekumashure uye pan-corneal cornea, ine chinotungamira kukosha kwekuongororwa kwehunhu hwekuona zvisati zvaitika uye mushure mekuvhiyiwa kwekuratidzira.
✦ Simulation kuyedza-kwekubata lens
Mukupindura kune zvido zvekiriniki zvemalensi ekubatana, zvichibva pakuyerwa kweiyo murwere corneal topography, iyo Scansys system inogona kukurudzira malensi ekuonana akakodzera maronda emakona emurwere uye kutevedzera kutsvedza kweiyo fluorescence yeiyo cornea pasi pechigadziko chemwenje, ichikurumidza kuita yeorethokeratology lens inokodzera, Iyo inobvisa kunetseka kwekuwanda kwekusvibisa kwemakona kwevarwere.
✦ ICL yekuvhiya kuongororwa
Usati wavhiyiwa, inopa yakawandisa dhata senge yepamberi imba kudzika uye corneal dhayamita. AI zvine hungwaru inokurudzira ICL saizi uye inofanotaura postoperative arch kukwirira. Mushure mekuvhiya, imwe chete-yepamusoro tsananguro Scheimpflug tomographic mufananidzo inogona kutorwa chero kona kuti inyatso kuyera kureba kweiyo arch.
Dhijitari infrared kamera + Scheimpflug yedigital CCD kamera
475nm yakatsaurwa LED yakatemwa mwenje sosi
28 mafuremu pasekondi / 2 60 mafuremu pasekondi / imwechete furemu kupfura
Corneal topography kuyera renji
Corneal ukobvu kuyera chiyero
Anterior kamuri kudzika kuyera renji
Mudzidzi dhayamita yekuyera renji
Anterior kamuri vhoriyamu kuyerwa renji
Angle yekuyera renji
Kappa / Alpha kona
R (0-3mm) θ (0-360 °)
Pashure: Yakadzama yekubatanidza optometry tafura ML-400
Zvadaro: Akatungamira mashanu-anomhanyisa zoom akachekesa mwenje maikorosikopu ML-350
Anterior Chikamu Kuongorora
Anterior Chikamu Laser
Kusarudzwa intraocular kumanikidza T170
Corneal topographic mufananidzo dijitari system instru ...
Kuona electrophysiology chiridzwa BIO-2000
Yakabata ruoko inotakurika isiri-mydriatic fundus kamera F ...
Yakabatanidzwa otomatiki ekuona munda kuongorora sy ...
High-nemazvo kuyerwa rebound tonometer SW ...